အင်္ဂလိပ်လို "ကတိသစ္စာပြု" ၏အဓိပ္ပာယ်
အဆိုပါစကားလုံး "အပြုသဘောဆောင်" ရိုးရိုးသငျသညျအရာတစ်ခုခုဖျောနေကြတယ်ဒါကြောင်းဆိုလိုသည်။ extension ကိုအသုံးပြုပုံအတွက် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ တစ်ခုအပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ချက်အပြုသဘောဆောင်ကြောင်းမည်သည့်ဝါကျသို့မဟုတ်ကြေငြာသည်။ တစ်ခုကအပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းပြောဆိုချက်တစ်ခုဝါကျသို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်အဆိုပြုအဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါတယ်: "Birds ဂိမ်းပျံသန်း", "ယုန်ကို run," နှင့် "ငါးရေကူး" ဖြင့်အကြောင်းအပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ချက်အောင်, အဘာသာရပ်များတက်ကြွစွာတစ်ခုခုလုပ်နေတာရှိရာအားလုံးအပြုသဘောဆောင်စာကြောင်းများဖြစ်ကြသည် ရွေ့လျားမှုအတွက်နာမ်။
တစ်ခုကအပြုသဘောဆောင်သောစကားလုံးသို့မဟုတ် ဝါကျ အများအားဖြင့်သာမန်ပုပါဝင်သောအပျက်သဘောဆောင်သောဝါကျတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ် အနုတ်လက္ခဏာမှုန် "မဟုတ်ပါဘူး။ " အနုတ်လက္ခဏာထုတ်ပြန်ချက်များ၏ဥပမာများပါဝင်သည်: "ယုန်ပျံသန်းကြဘူး" နှင့် "ပြည်သူ့ float ကြဘူး။ " တစ်ခုကအပြုသဘောဆောင်ဝါကျဆန့်ကျင်ဘက်အသုံးပြုပုံခိုင်မာသွားမယ့်အစားတစ်ဦးအဆိုပြု negates တဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သီရိ Exhortatio ဎ, YouTube သတင်းအချက်အလက် site ကို, တစ်ခုအပြုသဘောဆောင်စကားလုံး, ထားသောစာပိုဒ်တိုများ, ဒါမှမဟုတ်ဝါကျမှတ်ချက်ပြု:
"တစ်အနုတ်လက္ခဏာပုံစံသည်၎င်း၏ falsity ဖော်ပြနေချိန်တွင် ... အခြေခံအခိုင်အမာများ၏တရားဝင်မှုသို့မဟုတ်အမှန်တရားဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာဝါကျများဖြစ်ကြောင်း, 'ဂျိန်းကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်' နဲ့ 'ဂျိန်းကဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ' ' ဒုတိယအနုတ်နေစဉ်ပထမဦးဆုံးအပြုသဘောဆောင်ဖြစ်၏။ "
အဆိုပါစကားလုံး "အပြုသဘောဆောင်" တစ်ခုနာမဝိသေသနဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ခုခုဖော်ပြသည်။ Dictionary.com အဖြစ်အပြုသဘောဆောင်သတ်မှတ်ပါတယ်:
"အတည်ပြုသို့မဟုတ် assenting; အမှန်တရား, တရားဝင်မှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု၏တကယ်တော့အားကောင်းမောင်းသန်။
ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နာကျင်စွာရိုးရှင်းသောထင်ပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးမှာအတွက်စာကြောင်းများအများဆုံးသူတို့ကစာရေးဆရာမိတ်ဆက်သည်ဆိုအတည်ပြုကြောင်းအတွက်အပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, အပြုသဘောဆောင်စာကြောင်းစကားပြောအင်္ဂလိပ်စာအများစုတက်ပါစေ။
သင်အမှန်တကယ်ဆိုလိုတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတွေးသယ်ဆောင်ဖို့မရှိမဖြစ်မဟုတ်ပေမယ့်သင်သာအနှုတ်လက္ခဏာစာကြောင်းပြောဆိုလျှင်, သာရှိသမျှသည်အခြားသောရွေးချယ်စရာ-ထိုကဲ့သို့သောဟုငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးပွိုင့်ရောက်ရှိလာသော, အစားထူးဆန်းပါလိမ့်မယ် "ဟု The လူတစ်ဦးတစ်ကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူး" သူမကမိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့, ဒါမှမဟုတ်သင်အမှန်တကယ်ကကြောင်ရဲ့ဆိုလိုသောအခါ "အိမ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ဦးငှက်, တွားသွားသတ္တဝါ, ငါး, ဒါမှမဟုတ်ခွေးမဟုတျပါဘူး" ။
ဤအမှုကိစ္စအတွက်အနုတ်လက္ခဏာကို အသုံးပြု. စာကြောင်း convolutes; "သူမဟာမိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့" သို့မဟုတ် "အိမ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြောင်တစ်ကောင်ပါပဲ။ ": ကရိုးရှင်းစွာအပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ချက်စေရန်ပိုကောင်းမယ့်
ဤအကြောင်းကြောင့်အများဆုံးစာကြောင်းများဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းကဲ့သို့သောနေကြသည်ဒီတစ်ခု-အဖြစ်အပြုသဘောဆောင်ခြင်း, စပီကာသို့မဟုတ်စာရေးဆရာတမင်တကာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအချက်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်ဆန့်ကျင်နေပါသည်မဟုတ်လျှင်။ သင် "မ" သင်၏ဝါကျပုံစံအတွက်အပြုသဘောဆောင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဆိုသညျကားဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်မဟုတ်လျှင်။
စိတ်ဝင်စားစရာနှစ်ချက်ဆိုးကျိုးများ၏အုပ်ချုပ်မှုကို, သင်သည်သည်ဟုဆိုပြန်လျှင်တစ်ခုခုလုပ်နေတာ "မ" ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ကျွန်မရုပ်ရှင်သွားမနော်" ဟုအဆိုပါဝါကျအပြုသဘောဆောင်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်အဖြစ်ကောင်းစွာအပြုသဘောဆောင်စာကြောင်းများသက်ဆိုင် တစ်ခုခု။
အပြုသဘောဆောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသို့မဟုတ်တစ်ဦးမှအတည်ပြုထောက်ခံဝါကျစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းများ၏ concept ကိုရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည် polarity က ။ ခုနှစ်တွင် ဘာသာဗေဒ , အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောပုံစံများအကြားခြားနားထုတ်ဖော်ပြောဆိုစေခြင်းငှါ syntactically , ( "ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်ဖို့မ") morphologically ( "ကံ" vs. "ကံကောင်း"), ဒါမှမဟုတ် lexically ( "အားနည်း" vs. "ခိုင်မာတဲ့") ။
ဤရွေ့ကားစာပိုဒ်တိုများအားလုံးတစ်အနုတ်လက္ခဏာစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုဟာအပြုသဘောဆောင်စကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုနှင့်၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဆံ့။ "ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်ဖို့မ" အက်ဥပဒေ3ကနေနာမည်ကြီးထားသောစာပိုဒ်တိုများ, ရှိတ်စပီးယားရဲ့ပြဇာတ်၏ရှုခင်း 1, " Hamlet ," (အနုတ်လက္ခဏာပါလိမ့်မယ်) ကိုသူ (အပြုသဘောဆောင်ပါလိမ့်မယ်) ကိုမတည်ရှိသို့မဟုတ်တည်ရှိမနေသင့်သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ခေါင်းစဉ်ဇာတ်ကောင်ကိုတွေ့ ။
ဒုတိယဥပမာထဲမှာ, သငျသညျဆိုသညျကားနိုင်ကာအပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ချက်ပါလိမ့်မယ်အရာ "သူသည်, ကံကောင်းက" သို့မဟုတ် "သူကံဖြစ်ပါတယ်" ဟုအနုတ်လက္ခဏာကြေညာချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အရာ။ ပြီးခဲ့သည့်ဥပမာထဲမှာ, သင်ကြေညာလိမ့်မယ်, "သူမဟာသန်မာက" တစ်ဦးမှအတည်ပြုထောက်ခံအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာ connotation ရှိပြီးဖြစ်သော "သူ, (ခိုင်ခံ့မဟုတ်) အားနည်းသည်" အရာ။
အပျက်သဘောဆောင်သော vs. အပြုသဘောဆောင်
သူမ၏စာအုပ်အတွင်း Suzanne Eggins, "စနစ် Functional ဘာသာဗေဒမှနိဒါန်း" အပြုသဘောဆောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာပေးနှင့်၎င်း၏ဝင်ရိုးစွန်းဆန့်ကျင်ဘက်, အနုတ်လက္ခဏာ:
တစ်ဦးကအဆိုပြုတဲ့အထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်စောဒကတက်ပေမယ့်စောဒကတက်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုပါပဲ။ ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့အရာတစ်ခုခုသည်သို့မဟုတ်မရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ငြင်းခုံနေကြသည်။ ပြန်ကြားရေးအတည်ပြုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်နိုင်ရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်၏။ "
ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာအယူအဆမှ harkens: ကတိသစ္စာပြုစကားလုံးသို့မဟုတ်ကြေညာချက်အပျက်သဘောဆောင်သောစကားလုံးသို့မဟုတ်ကြေညာချက်-ယင်း၏ဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်-ဆိုလိုတယ်စဉ်တစ်ခုခု, ဒါကြောင်းဆိုလိုသည်။
ဒါကြောင့်, သင်ပေးထားသောကိစ္စကိုများအတွက်အမှုလုပ်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုမှန်ကြောင်းငြင်းခုန်, သင်ထားတဲ့အပြုသဘောဆောင်စိတ်ကူးဖော်ပြကြသည်ကိုမှတ်မိဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်နောက်တစ်ကြိမ်: "Donald Trump ကောင်းတစ်ဦးသမ္မတအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်," "သူမက" အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ် "သူကြီးအကျင့်စရိုက်ရှိတယ်။ " ဒါပေမယ့်သဘောမတူတဲ့သူကိုအခြားသူများဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့အနေအထားကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်သဖြင့်, အနုတ်လက္ခဏာငြင်းမယ်လို့: "Donald Trump ကောင်းတစ်ဦးသမ္မတအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး," "သူမဟာအားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ," နှင့် "သူကနည်းနည်း (သို့မဟုတ်လုံးဝမ) ဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်။ "
အနည်းကိန်း '' သူတို့က '(Grammar)
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်ပျက်ယွင်းနေ Parallel ၏ဥပမာများ
အများကိန်းများ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် (စကားများ)
ဂျော့ခ်ျ Carlin ရဲ့ "ဆော့ဖဘာသာစကား"
Grammar အတွက် Diphthongs ဘာတွေလဲ?
Logomisia (သမ်မာကမျြးဆန္ဒရှိ) ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါဘား Kochba ပုန်ကန်သည်အကြောင်းရင်းများ
ချီလီရဲ့ Atacama ကန္တာရများ၏ဂျီအနုပညာ
De-Extinction - ရှားပါးတိရစ္ဆာန်များ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးအွန်လိုင်းကျုရှင်န်ဆောင်မှုများ 2018 ခုနှစ်တွင်အသုံးပြုနည်း
Habitat ဆုံးရှုံးမှု, fragment နှင့်အဗဒ္ဒုန်နားလည်ခြင်း
အချိုရည်၏သမိုင်း - Pop ဖို့နိဒါန်း
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 20 မိန်းကလေးအဖွဲ့များ
Lactose ကိုဟဿဖြစ်မည်ကိုဒေသခံများနှင့် Lactase ဇွဲ
ရေနစ်မြုပ်၏အတ္တလန်တာ Falcon ခန်းမ
နယူးဂေါက်အိတ်နှင့် Push ကိုလှည်း
The New နေရောင်ခြည်စနစ်